नेपाली कांग्रेस र चौधाैं महाधिवेशन
विचार नेपाली कांग्रेस र चौधाैं महाधिवेशन ध्रुवलाल पाण्डे
नेपाली कांग्रेसको भूमिका हालका दिनमा अत्यन्त कमजोर र निरीह देखिँदै आएको छ । कांग्रेसकै नेताहरूले प्रतिपक्षको भूमिका पूरा हुन नसकेको स्वीकार गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षको सदन र सडक हुन्छ । सदनमा कांग्रेसको संख्या ठूलो छैन । तर, गत निर्वाचनमा कांग्रेसले ल्याएको मत हर्र्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले सडकबाट सरकारलाई सजग बनाउन सक्ने देखिन्छ । परन्तु, यसका लागि नेतृत्वमा नैतिक बल चाहिन्छ । कांग्रेसको नतृत्व भने नैतिक शक्तिमा कमजोर देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस आफँै विभिन्न स्थायी गुट र उपगुटमा विभक्त छ । नेतृत्वले गुटको फाइदामात्र हेरेको पाइन्छ । सरकार कान्डैकान्डमा मुछिएको छ । जनता यस्ता कुराबाट आक्रान्त छन् । तर, कांग्रेसले त्यस्ता क्रियाकलापको सशक्त विरोध गर्न सकिराखेको छैन । कांग्रेसले विरोधका लागि विरोध गरेजस्तो मात्रै देखिन्छ । कम्युनिस्टहरुको जनाधार खस्केको पक्कै हो तर नेपाली कांग्रेसको जनधार पनि बढेको छैन । अरु बिग्रे हामी सप्रन्छाैँ भन्ने सोच गलत हो । त्यस्तो नहुन पनि सक्छ ।
आक्रोशित युवालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि एकत्रित हुने र सशक्त विरोध गर्ने हुनसक्दो रहेछ । ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन त्यसको एउटा गतिलो नमुना हो । यसले स्थापित दलहरुप्रति जनआक्रोश बढेको देखाउँछ ।
यी सबै समस्या समाधानका लागि नेपाली कांग्रेसले आगामी चौधाैं महाधिवेशनमा गहन छलफल गरी दललाई एकजुट र तन्दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्छ । तर परिस्थिति हेर्दा तेस्तो देखिँदैन ।
महाधिवेशनको टुंगो लागेको छैन तर अहिले नै उमेदवारी घोषणाको बाढी नै लागेको देखिन्छ । तर उनीहरुको उमेदवारी केका लागि हो भन्ने प्रस्ट भने देखिँदैन । यसरी नेपाली कांग्रेस सुध्रिन्छ भन्नेमा कांग्रेसका कार्यकर्ता र जनता विश्वस्त भएको पाइँदैन । त्यसैले आगामि अधिवेशनबाट निम्न कुराहरुमा कांग्रेस स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छः
१ सैद्धान्तिक बहस र स्पष्टताः बीपी कोइरालाको समाजवादबाट कांग्रेस टाढा भइसकेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक दर्शन के हुने हो स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समय अनुकूल बनाउनुपर्ने भएमा सो समेत स्पष्ट गर्नुपर्छ । आगामी अधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवाद र राष्ट्रियताका विषयमा कांग्रेसले आफ्ना धारणा जनतासम्म लैजान नसके कांग्रेसप्रतिको आकर्षण बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले जनजनले बुझ्ने भाषामा र स्पष्ट मानकसहित आफ्ना सिद्धान्तको व्याख्या कांग्रेसको अधिवेशनको आवश्यकता हो । यल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पेट्रिक जे डेनिन ले आफ्नो किताब ‘ह्वाइ लिबरलिज्म फेल्ड (२०१८)’भन्ने मा लेखेका छ्न – कुनै पनि सिध्दान्त भनाइ र गराइमा फरक हुँदा असफल हुन्छ । कांग्रेसको अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसैले सैद्धान्तिक स्पष्टता अहिले कांग्रेस अधिवेशनको पहिलो अपरिहार्य सर्त हो ।
२. आजसम्मका पार्टीका कामको निर्मम पुनरवलोकन : नेपाली कांग्रेसले कंजुसी नगरीकन विभिन्न कालखण्डमा कांग्रेसले गरेका काम र त्यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई मेरो तेरो नभनी हाम्रो भनेर महाधिवेशनले धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ र त्यस्तो राम्रो कामलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमार्फत गाउँगाउँसम्म लैजानुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसको खुला तथा उदार अर्थ नीतिका कारण स्वास्थ्य, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत पूर्वाधारको विकास भएको छ । नेपाली कांग्रेसकै नीतिका कारण प्रतिव्यक्ति आयसमेत बढेको छ । सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम समयमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १९२ अमेरिकी डलर रहेकोमा २०१९ को अन्त्यसम्ममा १,०७१ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोपहरु पनि लागेका छन् । विभिन्न तहका निर्वाचनका टिकटहरु बेचिएका र दुःख पाएका कार्यकर्ताले टिकट नपाउँदा अन्तर्घात भई कांग्रेसका उम्मेदवारहरु हारेको चर्चा जनताका बीचमा हुनेगरेको छ । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा निर्मम छलफल गरी यस्ता गलत कार्य भविष्यमा नहुने प्रत्याभूति आगामी अधिवेशनले कार्यकर्ता र जनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।
३. धर्मसम्बन्धमा पार्टीको विचार : ८१.३ प्रतिशत हिन्दु, ९ प्रतिशत बौध्द र ३ प्रतिशत किराँत गरी जम्मा ९३.३ प्रतिशत सनातन धर्म मान्ने जनता भएको देशमा आन्दोलनका समयमा नउठेको धर्मनिरपेक्षता जबर्जस्ती लादियो भन्ने बुझाइ सामान्य जनतामा छ । कम्युनिस्टहरु धर्म विरोधी हुन् तर नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यता राख्ने लोकतान्त्रिक पार्टीको धारणा के आउँछ भनेर सर्वसाधारण जनता कुरेर बसेका छन् । त्यसैले यस विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आगामी अधिवेशनबाट जनताले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट विचार दिन सक्नुपर्छ ।
४. युवा आकर्षणको एजेन्डा : सन् २०११ को जनगणनाअनुसार लगभग ३८ लाख नयाँ युवा मतदाताका रुपमा आगामी निर्वाचनमा थपिन्छन् । नेपाली कांग्रेसमा युवालाई समेट्न बनाइएका सङ्गठनहरु नेविसंघ र तरुण दल मृत प्रायः छन् । तरुण दल र नेविसंघ आफैँमा विभाजित छन् । त्यसैले कांग्रेसको युवासम्म पुग्ने कडी चुँडिएको छ । नयाँ थपिने युवा मतदातामा कुनै दल विशेषप्रतिको आकर्षण छैन । किनभने उनीहरु पुरानो पुस्ताजस्तो कुनै दलको छायामा आन्दोलन गरेर आएको पुस्ता होइन । त्यसैले आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेसले युवालाई ध्यानमा राखेर स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ अन्यथा आगामी निर्वाचनको परिणाम सोचेभन्दा उल्टो आउन सक्छ ।
अन्त्यमा, अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने होडबाजी देखिन्छ । महाधिवेशनको मुखैमा यो स्वाभाविक पनि हो । तर विनाएजेन्डाको होडबाजीले कांग्रेसलाई कहीँ पुग्न दिँदैन । यस विषयमा बेलैमा कांग्रेसका सबै कार्यकर्ता र नेता सजग हुनु जरुरी छ । यी र यस्तै कुराहरुमा महाधिवेशनबाट कांग्रेस स्पष्ट हुन नसकेमा कसैले नेतृत्वमा बाजी त मार्ला तर कांग्रेसजन र जनताले पक्कै हार्नेछन् । अनि कांग्रेस कांग्रेसलाई अकल्पनीय दुर्घटनाबाट बचाउन पनि कसैले सक्नेछैन ।